Krishnap.com.np: अब मोबाईल ले नै घर चलाई दिने भो !!!
दुई तीन साल पहिले यदी यही कुर भनिएको भये शायद पत्यउन कसैले मान्न तयर हुने थियनन होल थियन होल । आज दुनियाँमा टेकनोलोजी ले निकैनै कोल्टो फेरिसकेको छ। हाम्रो हरेक आबश्यताको परीपुर्ती नहुनेहोल भनेर सोचन सकिन्दैन । नयाँ नयाँ प्रबिधी त्यस्तै नयाँ नयाँ उपकरन को बिकास जस्ले हाम्रो जीवनलाई सजिलो र सुलभ बनै दिएको छ ।
आज भन्दा एक दुई बर्षमात्र पछी हाम्रो घरको हरेक उपकरनहरु कुनै पनि ठाउमा गएर कुनै पनि बेला कन्ट्रोल मतलब खोल्न चलाऊन चेक गर्न सक्छौ र यसको लागि मद्घत चाँही उही तपाईंको साथी मोबाईल ले गर्ने छ। अब साथी किन भनेको मोबाईललाई भन्दा नि तपाईंको केही काम भएन भने मोबाईल चलाऊन सुरु गर्नु हुन्छ नि हैन ?
नोकिया ले हालै बार्सिलोन शहरमा होम कन्ट्रोल सिस्टमको प्रदर्शन गरेको थियो । होम कन्ट्रोल सिस्टम एउटा यस्तो यन्त्र हो जस्ले मोबाईल फोन को मद्घतबाट घरको बिभिन्न उपकरन सँग जोडीदिने काम गर्छ ।
यो जोडी सके पछी प्रयोग कर्ताले मोबाईल फोनकै सहयोग बाट घरको कुनैपनी बिद्युतिय उपकरनलाई चलाऊन सक्छन। एयरकन्डिसन सिस्टम चलाऊन बन्द गर्न सकिन्छ यहाँ सम्मकी पर्द लगाउने अथवा खोल्ने त्यसतै ढोका लगेको छ छैन चेक गर्ने काम गर्न सकिन्छ । नोकियाले यस्को अझबिकास गर्नेको कुरको पनि खुलासा जस आन्तर्गत आन्य जस्तै फ्रिज , वसिङ मसिन, टिवी अदिपनी कन्ट्रोल गर्न सकिने हुन्छ । यतिमत्र होइन पछी यो एस्तो हुन्छ जहाँ तपाईंले प्रि-फिक्स सिस्टम भन्नले पहिले नै टाईम मिलएर छोड्निन सक्नुहुन्छ त्यसतै कोही पाहुन घरमा ऐपुग्नु भयो तर तपाईं घरमा हुनु हुन्न भने ढोका पनि खोल्दिन सक्नु हुन्छ मोबाईल फोन मार्फत नै, अब यो भन्दा के चहियो र? मात्र सिबाय नेपालमा कहिले भित्रन्छ कुर्न देखी बहेक । हैन र?
Posted by Krishna Pokhrel at 11:26 PM
कृष्ण December 12, 2008 at 1:25 AM
सिकरु जि तपाईं यतिकै पनि गूगलबाट चलाऊन जान्नुनै हुने रहेछ त्यहा बाट सर्च गर्नुस् नभय तल दिएको वेबसाईट बाट ट्राइ गर्नु भये हुन्छ टिप्पणी को लागि धन्यवाद ।